कंगना रनावतले गरिन् उद्धव ठाकरेको कठोर आलोचना
बृहन्मुम्बई म्युनिसिपल कर्पोरेसन (बीएमसी) ले बुधवार बलिउड अभिनेत्री कंगना रनावतको मुम्बईस्थित पाली हिलमा रहेको कार्यालय भत्काएपछि कंगनाले महाराष्ट्र सरकारको कठोर आलोचना गरेकी छन् ।
शिवसेना तथा महाराष्ट्रको मुख्यमन्त्री उद्धव ठाकरेलाई कंगनाले ट्वीटमार्फत लगातार शाब्दिक आक्रमण गरिरहेकी छन् । उनले उद्धवका साथै कांग्रेसमाथि पनि प्रहार गर्दै शिवसेनालाई सोनिया सेना नाम दिएकी छन् ।
कंगनाले ट्वीट गर्दै भनिन्, ‘जुन विचारधारामा आधारित भई श्री बालासाहेब ठाकरेले शिवसेना निर्माण गरेका थिए, त्यही विचारधारालाई बेचेर शिवसेना अहिले सोनिया सेना बनिसकेको छ । जुन गुण्डाहरूले म नहुँदा मेरो घर तोडफोड गरे, तिनीहरूलाई सिभिक बडी भन्न मिल्दैन । संविधानको यति ठूलो अपमान नगर ।’
अर्को एक ट्वीटमा कंगनाले लेखिन्, ‘तिम्रा पिताजीको सुकर्मले तिमीलाई सम्पत्ति त देला तर सम्मान तिमी आफैंले कमाउनुपर्ने हुन्छ । मेरो मुख त बनद गरौला तर मेरै आवाज मपछि सयौं अनि लाखौं आवाज निस्कन्छ । ​कतिजनाको मुख बन्द गर्छौ ? कहिलेसम्म सत्यबाट भाग्छौ ? तिमी केही हैनौ, वंशवादको नमूना मात्र हौ ।’
यसअघि कंगनाले भिडियो बनाएर उद्धव ठाकरेमाथि आक्रमण गरेकी थिइन् । कंगनाले मुम्बईलाई पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीरसँग तुलना गरेपछि आक्रोशित भएको महाराष्ट्र सरकारले बीएमसी लगाएर उनको कार्यालय भवन भत्काउन लगाएको बताइएको छ । तर बम्बे उच्च अदालतले भत्काउन रोक लगाएपछि बीएमसीले थप तोडफोड नगर्ने भएको छ ।
बलिउड अभिनेत्रीहरूलाई सोधपुछका लागि बोलायो लागूऔ...
ड्रग्स केस : यी २ टिभी कलाकारमाथि पनि प्रहरीले चला...
बलिउडमा गाँजा र कोकिन सेवन छ्यापछ्याप्ती : सुशान्तक...
राष्ट्र सङ्घको ७५ औँ महासभामा प्रम ओलीले गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ
सेनाबाट २३४ को शव व्यवस्थापन